ukuhlola amawebhusayithi e-commerce
none Qa Ukuhlola amawebhusayithi we-E-commerce
Ukuhlola amawebhusayithi we-E-commerce
Ukuhlola amawebhusayithi we-E-commerce kudinga ulwazi ngamasu wokuhlola iwebhu kanye nesizinda se-e-commerce.
Amawebhusayithi amaningi we-E-commerce abelana ngesihloko esijwayelekile nesakhiwo, isb.
Ikhasi Lemiphumela Yokucinga
Imininingwane Yomkhiqizo Ikhasi
Ifomu Loku-oda Ikhasi
Ikhasi Lokuqinisekisa i-oda
Ikhasi Lokungena Ngemininingwane Namakhasi ama-Akhawunti
Vele, kunamanye amakhasi amaningi kuwebhusayithi ejwayelekile ye-e-commerce, kepha uhambo lomsebenzisi oluyinhloko oluyinhloko lungahlanganisa ukuthinta amakhasi angenhla futhi kulapho ukuhlolwa kwamawebhusayithi e-commerce kufanele kugxile khona: Uhambo Lokukhokha.
Lawa makhasi 'angaphambili' kungenzeka axhumane nezinsizakalo zewebhu 'zangemuva kokugcina', ezinjenge-Product Search Service, i-Content Service, i-Booking Engine, i-Payment Services, i-Accounts Services, njll. ukuthi sihlole izinsiza ngazinye sisodwa futhi sihlanganiswe nohlelo lonke.
Ukugeleza kohambo lomsebenzisi okujwayelekile kuzoqala ekhasini eliyisiqalo, noma ekhasini lokufika komkhiqizo, ukufuna umkhiqizo, ukubuyekeza umkhiqizo, ukwengeza umkhiqizo (imikhiqizo) enqoleni yokuthenga, gcwalisa imininingwane ye-oda nemininingwane yokukhokha bese uthumela i-oda.
Imibono Yokuhlola Amawebhusayithi E-commerce
Sesike saxoxa amathiphu nemihlahlandlela yokuhlola izinhlelo zokusebenza zewebhu nezindlela zokuhlola ezivamile namasu wokuhlola wokuhlolwa kohlelo lokusebenza lwewebhu futhi asebenza ekuhloleni amawebhusayithi e-commerce.
Kulesi sihloko, sihlola amanye amacala wokuhlola ajwayelekile aqondene nokuhlola amawebhusayithi e-commerce. Imibono ethulwe lapha ngamacala wokuhlola asezingeni eliphakeme ajwayelekile asebenza kumawebhusayithi amaningi we-e-commerce, futhi ungasebenzisa lo mhlahlandlela ukuqala ngokuhlola amawebhusayithi e-commerce.
Ukuhlola inqola yokuthenga
Izinqola zokuthenga zingenye zezici eziyinhloko zewebhusayithi ye-e-commerce ngakho-ke yakha indawo ephambili yokuhlola amawebhusayithi e-commerce. Ivumela amakhasimende ukuthi akhethe futhi agcine izinto eziningi enqoleni futhi azithenge ngasikhathi sinye.
Esikhathini samanje, izinqola zokuthenga seziphenduke “ubuhlakani” ngomqondo wokuthi ziyakhumbula ukuthi iziphi izinto ozigcina kuzo ukuze ukwazi ukuzithola emuva kwesikhathi noma kwenye into.
Ezimweni eziningi, amakhukhi asetshenziselwa ukugcina idatha yenqola noma uma umsebenzisi ene-akhawunti esebenzayo futhi angene ngemvume, i-id yeseshini ingagcinwa kumsebenzisi ku-database. Kunoma ikuphi, kunamacala wokuhlola abalulekile okufanele abe yingxenye yokuhlola inqola yokuthenga.
Faka into eyodwa enqoleni - inqola kufanele ivuselelwe ngento enegama elifanele, isithombe, nentengo.
Khulisa ubuningi bento kusuka enqoleni - intengo kufanele ivuselelwe ukubonisa inani elifanele.
Faka into efanayo kaningi - kufanele kube nento eyodwa enqoleni, kepha inani kufanele likhombise inani lezengezo futhi inani eliphelele kufanele likhombise isamba senani lento ngayinye.
Faka izinto eziningi zezinhlobo ezahlukahlukene - Kwinto ngayinye engeziwe, kufanele sibone igama elihambisanayo, isithombe, nentengo kanye nentengo ephelele yazo zonke izinto.
Susa ezinye izinto enqoleni - inqola kufanele ivuselele ukukhombisa izinto ezikhona enqoleni, inani eliphelele kufanele likhombise isamba esisha.
Susa zonke izinto enqoleni - Ibhalansi yenqola kufanele ibe zero, akukho zinto okufanele zikhonjiswe enqoleni.
Chofoza entweni enqoleni - kufanele sikwazi ukubona eminye imininingwane ngomkhiqizo esisanda kuwuchofoza njengokuzivelelayo noma ukuqondisa kabusha ekhasini lomkhiqizo.
Faka izinto (izinto) enqoleni, vala isiphequluli uphinde uvule isiza esifanayo - kuhle, inqola kufanele isabambe izinto zakho. I-NB lokhu ikakhulukazi kuncike kuzidingo zokuthi inqola kufanele iziphathe kanjani.
Amakhuphoni - sidinga ukubheka ukuthi intengo yenqola yehlisiwe yini lapho sisebenzisa isigqebhezana hhayi ukuthi sehlisiwe lapho sisebenzisa isigqebhezana esingavumelekile noma esiphelelwe yisikhathi.
Sesha Ifomu, Ukuhlunga, Ukuhlunga, Ukubamba Ngekhanda
Ifomu lokusesha livame ukubakhona emakhasini amaningi ukuvumela abasebenzisi ukuthi bafune imikhiqizo noma ngabe ukuphi kusayithi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi isici sokusesha sihlolwe emakhasini asebenzayo.
Iningi lekhodi yemodyuli yokusesha isetshenziswa kabusha emakhasini amaningi noma kumathempulethi, noma ingaba yingxenye yesigaba sikanhlokwana esiboniswa kusayithi lonke. Uma kunjalo, ukusebenza kwesici sokusesha kufanele kufane nomaphi lapho kwenzeka khona futhi ukuqhuba wonke amacala wokuhlola kuwo wonke amakhasi kuwukuchitha umzimba.
Ukuhlola amawebhusayithi we-e-commerce ngeke kube mnandi ngaphandle kokuhlola ikhasi elinothile kakhulu kusayithi, Ikhasi Lemiphumela Yosesho.
Lapho sifuna umkhiqizo, siqondiswa kabusha ekhasini le-Search Results (SRP) nazo zonke izinto ezifanele esizifunayo. Kunezinto eziningi okufanele uzihlole nezici eziningi ozozihlola, kepha izici ezintathu ezibaluleke kakhulu futhi ezihambisana ngqo ne-SRP ziyahlunga, ukuhlunga kanye ne-pagination.
Imikhiqizo efanele - hlola ukuthi imikhiqizo ekhonjisiwe ihlobene yini nalokho okuseshwe.
Imininingwane yomkhiqizo - imikhiqizo kufanele ikhombise isithombe, igama, intengo futhi mhlawumbe izilinganiso zamakhasimende nenombolo yezibuyekezo.
Inani lemikhiqizo ekhasini ngalinye - hlola ukuthi inani lemikhiqizo ekhasini ngalinye liyahambisana yini nemfuneko.
Ukupenda - hlola ukuthi zonke izinto ezisekhasini elilandelayo zehlukile yini ekhasini langaphambilini, okusho ukuthi azikho izimpinda
Ukuhlunga - kungaba nezinketho ezine kuya kwezinhlanu ongakhetha kuzo kwimenyu yokudonsela phansi. Ukuhlunga kuvame ukukhetha okukodwa, i.e. ungahlela ngepharamitha eyodwa kuphela.
Ukuhlunga kanye nePagination - lapho kunemikhiqizo emakhasini amaningi lapho uhlela ipharamitha, i-oda lokuhlunga kufanele lihlale njengoba ungena paginate, noma eminye imikhiqizo ilayishiwe (uma kungumthwalo we-Ajax)
Ukuhlunga - ngokungafani nenketho yokuhlunga, izinketho zokuhlunga zikhetha okuningi, okungukuthi ungahlunga ngamapharamitha amaningi. Kungumqondo omuhle ukuhlola okokuhlunga okukodwa nezinketho zokuhlunga okuningi.
Ukuhlunga kanye nePagination - Futhi, lokhu kubalulekile, lapho sihlunga ekhasini elilodwa, empeleni, njengoba sizama ukuthola ukuthi isihlungi sizosetshenziswa kuyo yonke indawo.
Ukuhlunga nokuhlunga - icala elibalulekile lokuhlola lixuba izinketho zokuhlunga nokuhlunga ndawonye, ​​isb. Hlunga ngentengo bese uhlela ngentengo ephezulu ukuya phansi, noma enye indlela. Ngenkathi izici ezingazodwana zingasebenza kahle, uma zihlanganiswa nenye into, ukusebenza kwesici esisodwa noma zombili kungahle kwephule, ngakho-ke kubalulekile ukuthi sihlole imiphumela lapho sihlanganisa ukuhlunga nokuhlunga.
Ukuhlunga, Ukuhlunga, kanye nePagination - lokhu kubheka ukuthi lapho kusetshenziswe zombili izinhlobo nezihlungi, zihlala njengoba sisalalisa noma imikhiqizo eminingi ilayishwa.
Dala i-akhawunti bese ungena ngemvume
Amanye amawebhusayithi e-commerce akuvumela ukuthi uthenge into njengesivakashi, isb.ngaphandle kwesidingo sokwakha i-akhawunti, bese kuba isinyathelo sokuzikhethela sokwenza i-akhawunti lapho kufakwa i-oda.
Lapho kwenziwa i-akhawunti, umsebenzisi angangena ngemvume kunoma yisiphi isigaba ohambweni lokuthenga. Kubalulekile ukuthi sivivinye konke lokhu kwehluka ohambweni lomsebenzisi lapho sihlola amawebhusayithi e-commerce.
Thenga into njengesivakashi - Uma isiza sivuma, hlola ukuthi ungakwazi yini ukuthenga into ngaphandle kokuthi udale i-akhawunti.
Ama-akhawunti akhona namasha - Thenga into nge-akhawunti ekhona nange-akhawunti esanda kudalwa.
Dala i-akhawunti bese ungena ngaphambi kokuthenga - lokhu ukuhlola ukuthi into oyithengayo iyangezwa futhi ixhumeke ku-akhawunti efanele. Futhi, akufanele utshelwe ukungena futhi uma usungenile ngemvume.
Ukungena ngemvume kuqondisa kabusha - hlola ukusebenza kwesici sokungena ngemvume kumakhasi ahlukene. Amanye amasayithi aqondisa kabusha umsebenzisi ekhasini elifanayo lapho achofoze khona isixhumanisi sokungena ngemvume kanti amanye amasayithi aqondisa kabusha umsebenzisi kumakhasi ama-akhawunti. Lokhu kufanele kuhlolwe kahle.
Isikhathi sokungena - uma ungena ngemvume hlola ukuthi uhlala ungene ngemvume njengoba ubhekabheka imikhiqizo. Futhi, udinga ukuhlola ukusebenza lapho umsebenzisi angahlangani nesayithi isikhathi esithile. Ngabe iseshini izophela ngemuva kwesikhathi? Qiniseka ukuthi umsebenzisi ukhishwe ngemvume ngemuva kokuphuma kwesikhathi seseshini.
Ngemvume futhi Phuma - uma ungene ngemvume, phuma bese uqinisekisa ukuthi uphumile nokuthi awukwazi ukufinyelela kunoma yimaphi amakhasi ama-akhawunti.
Izinkokhelo ziyingxenye ebalulekile yokuhlola amawebhusayithi e-commerce. Ngemuva kwakho konke, yilokhu okuvumela abasebenzisi ukuthi bathenge izinto zabo ngaphandle kwesidingo sokushayela inombolo ukufaka i-oda labo.
Izinhlobo zokukhokha - Izinhlobo ezihlukene zokukhokha kufanele zonke zihlolwe, isb. Ikhadi lesikweletu, i-Paypal, Ukudluliswa Kwebhange, Izitolimende, njll
Isitoreji Semininingwane Yesitoreji - ingabe imininingwane yekhadi lesikweletu lekhasimende lesayithi ligcina? Uma kunjalo zigcinwa ngokuphepha? Ingabe kunjalo I-PCI iyahambisana ?
Ukuhlolwa Kwangemva Kokuthenga
Lapho senza i-oda, kunezenzo eziningi abasebenzisi abangazenza ezihlobene nokuthenga kwabo. Ukuhlola ukusebenza kwangemva kokuthenga nakho kuyisici esibalulekile sokuhlola amawebhusayithi e-commerce. Lokhu kungaba:
Khansela i-oda noma ushintshe ubuningi be-oda
Buyekeza i-oda lakho lakamuva nomlando wezinto ezithengiwe
Izinguquko ku-akhawunti, ezifana nekheli lokubhila, ikheli lokuthumela, iphasiwedi, imininingwane yephrofayili efana negama, ikheli le-imeyili ngisho nokususa i-akhawunti.
Akungabazeki ukuthi ukuhlola amawebhusayithi e-commerce kuyinselele futhi kudinga ikhono eliningi. Lo mbhalo umane nje uyiphuzu leqhwa lawo wonke amacala wokuhlola afanele angenziwa lapho kuvivinywa amawebhusayithi e-commerce futhi angasetshenziswa njengesiqalo.
Kunokusebenza okuningi okuningi okufanele kuhlolwe njengengxenye yokuhlola amawebhusayithi e-commerce anjenge:
Ama-carousels womkhiqizo nemikhiqizo enconyiwe.
Ukuboniswa okulungile kwemininingwane ekhasini lemininingwane yomkhiqizo okuvame ukuba nokuqukethwe okunzima.
Isizindalwazi somkhiqizo - idatha iguqulwa kanjani ngemuva kokuthi into ithengiwe?
Warehouse System - ingabe indawo yokugcina impahla noma umuntu wesithathu waziswa kanjani uma kufakwa i-oda?
Ukuxhumana nekhasimende, ama-imeyili okuqinisekisa, okuqukethwe yi-imeyili, ukubuyiselwa, izikhalazo, njll.
Okubaluleke kakhulu lapho kuvivinywa amawebhusayithi e-commerce, ukuqinisekisa ukuthi isici ngasinye sizisebenzise kahle izidingo zaso.
indlela yokugenca isiphakeli sewebhu
umehluko phakathi kwe- put and patch
Ungawafunda Kanjani Amafayela kuJava
Isifundo se-JMeter: Ukuhlolwa kwe-REST Web Services
Uzisebenzisa Kanjani Izindaba Zomsebenzisi?
Izinyathelo ezi-4 zokuphatha idatha yakho yokuhlola
Ama-Unicorn e-SDET - Kungani Kunzima Kangaka Ukuqasha ama-SDET?
Ngabe i-Agile ingaphumelela ngaphandle kokuhlolwa okuzenzakalelayo?
Ungakwenza kanjani Parameterize Ukuguquguquka Okuguqukayo
Ungayisebenzisa Kanjani i-CURL ukuthumela Izicelo ze-API
Ungashutha kanjani i-Browser Network Traffic (XHR) ngeCypress
Ungasisebenzisa kanjani iSQL Dala Isitatimende Ukwakha i-Database Namathebula